သင်သည် အချိန်ကို ခိုးယူနေသူလော၊ အခိုးခံနေရသူလော
လူသားတိုင်းအတွက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သာတူညီမျှ ရရှိနေကြသည်၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရကြသည်မှာ အချိန်(Time) ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အချိန်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲတတ်မှုအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အောင်မြင်မှု ကျရှုံးမှုတို့ကလည်း မတူညီတတ်ကြပေ။
သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင် ကျော်ကြား ထင်ရှားသူများ သည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်များကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲတတ်သူများ၊ အချိန်ကို တန်းဖိုးရှိစွာ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချတတ်သူများ၊ ကိုယ်ပိုင် အချိန်ဇယားဖြင့် ဘဝကို ဖြတ်သန်းကြသူများဖြစ်သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကျောင်းသား အရွယ်က အချိန် ခွဲဝေသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာတစ်ဦး ပြောပြခဲ့သော စကားများက ကျွန်တော့်အတွက် တန်းဖိုးကြီးမားလှသည်။ ဆရာက သူ၏တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှု၊ တစ်လတာ ဖြတ်သန်းမှု၊ တစ်နှစ်တာ ဖြတ်သန်းမှုတို့ကို အချိန်ဇယားတစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး ဘဝကို ဖြတ်သန်းသည်။ သူ၏ အလုပ်ပြီးမြောက်မှု၊ အလုပ်တိုးတက်မှု၊ စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်မှုတို့ကိုလည်း ကုန်လွန်သွားခဲ့သော အချိန်များနှင့် အမြဲတမ်း နှိုင်းယှဉ်သည်။ တိုးတက်မှု မရှိဘဲ ကျဆုံးမှု ဆုတ်ယုတ်မှုတို့ရှိခဲ့ပါက သူ၏ အချိန်ခွဲဝေ သုံးစွဲမှု မှားယွင်းနေ ခြင်း ရှိ မရှိကို တစ်ဖန်ပြန်၍ ဆန်းစစ်တတ်သူ ဖြစ်သည်။
(က) ကုသိုလ်ရရှိအောင် ပြုမူနေထိုင်ခြင်း
(ခ) ဥစ္စာဓန တိုးပွားအောင် ရှာဖွေခြင်း
(ဂ) ပညာ တိုးတက်အောင် ဆက်လက်၍ သင်ယူမှုပြုခြင်း
(ဃ) အသိပညာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားအောင် ရှာဖွေ လေ့လာခြင်း
(င) မိတ်ဆွေကောင်း မိတ်ဆွေသစ်များ တိုးပွားအောင် ရှာဖွေခြင်း စသည့် အချက်(၅)ချက်ကို ဆရာက လက်ကိုင်ပြုထားသည်။ တစ်နေ့တာတွင် ထိုအချက် (၅)ချက်ထဲမှ တစ်ချက် (သို့မဟုတ်) နှစ်ချက် သုံးချက် မရရှိခဲ့ပါက ထိုနေသည် ဆရာအတွက် အဓိပ္ပါယ် မရှိသောနေ့၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သောနေ့ တစ်နေ့အဖြစ် သက်မှတ်ထားသူ ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကိုလည်း သူကဲ့သို့ တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုကို အတုယူရန် ဆရာက အမြဲတိုက်တွန်းတတ်သည်။ သို့သော် လည်း ကျွန်တော်က သည်ကနေ့အချိန်ထိ ဆရာကဲ့သို့ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အကျိုးရှိစွာ အသုံးမချတတ်သေးပေ။
Recommended for you - အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာက
နေ့စဉ် တန်ဖိုးမဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်များက တစ်နေ့ နာရီပေါင်း သုံးလေးငါးနာရီ၊ တစ်လ နာရီပေါင်း တစ်ရာ နှစ်ရာ၊ တစ်နှစ် နာရီပေါင်း တစ်ထောင် တစ်ထောင့်ငါးရာ ဖြုန်းတီးမိနေသည်။ ထိုသို့ ဖြုန်းတီးမိ သော ကိုယ်ပိုင်အချိန်များသည် ကျွန်တော့်၏ ညံ့ဖျင်းမှု အပျင်းထူမှု အားနာတတ်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သလို သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများ၏ အချိန်ခိုးယူမှုတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးမဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ဖြုန်းတီးမိသော နာရီပေါင်းများစွာကို လွန်စွာ နှမျောမိသည်။ ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်များကို ငွေဖြင့် တန်ဖိုးသင့်ပြီး ပေးဝယ်၍လည်း မရနိုင်တော့ပေ။ အချိန်လွန် အချိန်နှောင်းမှ နောင်တရမိခြင်းသည် အချည်းအနှီးသာဖြစ်ရသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွင် အချိန်ကို တန်ဖိုးထားသူ၊ အချိန်တိကျသူ အရေအတွက်မှာ လူတစ်ရာလျှင် လူငါးဆယ်ပင် ရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ လူတိုင်းနီးပါးက အချိန်ကို ခိုးယူနေကြသူ အခိုးခံနေရသူများ သာ ဖြစ်နေကြသည်။ မိမိက မိမိအချိန်ကို မခိုးလျှင် တစ်ပါးသူက မိမိ၏ အချိန်များကို ခိုးယူနေကြသည်။
” သူငယ်ချင်းရေ… မင်းနဲ့ငါ နေ့လယ်စား စားရင် ပုံမှန်အချိန်မှာ ဆုံကြမယ် ”
” မင်းနဲ့ငါ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ ဝန်းကျင်လောက် ဆုံကြမယ် ”
” မင်းနဲ့ငါ ညပိုင်း တွေ့နေကျ နေရာ၊ တွေ့နေကျ အချိန်မှာ ဆုံမယ်နော် ”
ထိုကဲ့သို့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း အလုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် ချိန်းဆိုလျှင်ပင် အချိန်တိကျစွာ ချိန်းဆိုမှု မရှိ။ အရင်ရောက်နှင့်သူက နောက်လူရောက်လာသည့် အချိန်ထိ စိတ်ကြိုက် အချိန်ဖြုန်းပြီး စောင့်ကြရစမြဲပင်။
Recommended for you - ကျောင်းသားများအတွက် မှတ်ဥာဏ်ကောင်းပြီး ခွန်အားဖြစ်စေနိုင်မယ့် အစားအသောက်များ
မြန်မာပြည်၏နေရာ အနှံ့အပြားတွင် စိတ်ကြိုက် အချိန်ဖြုန်းနိုင်ရန် နေရာများကလည်း နေရာတိုင်းမှာပင် အဆင်သင့်ရှိနေကြ၏။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်၊ အအေးဆိုင်၊ အရက် ဘီယာဆိုင်စသည့် ဆိုင်များအားလုံးက လည်း မိမိ စိတ်ကြိုက် အချိန်ဖြုန်းနိုင်ရန် အခွင့်အရေး အပြည့်ရှိသည်။ မည်သည့်ဆိုင်ကမှ အချိန်ကြာမြင့်စွာ နေထိုင် ခြင်းအတွက် ငွေကြေး အသပြာ တစ်ပြား တစ်ကျပ်မျှပင် တောင်းခံခြင်း မရှိကြ။ ဆိုင်းတိုင်းလိုလိုပင် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ စိတ်ကြိုက် နေထိုင်ခွင့်ပေးထားကြသည်။
မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိရှိ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ အသုံးချရန် ကျွန်တော် စတင်လုပ်ဆောင်သောအခါတွင် အခက်အခဲပေါင်းများစွာနှင့် နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရသည်။
အလုပ်ကိစ္စချိန်းဆိုလျှင်ပင် ကျွန်တော် ချိန်းဆိုထားသူက ချိန်းဆိုထားသည့် အချိန်တွင် အချိန်မီ ရောက်မလာကြသည်က များသည်။ အမြဲတမ်း အချိန်နောက်ကျမှသာ ချိန်းဆို ထားသည့် နေရာကို ရောက်လာတတ်ကြသည်။ ကျွန်တော်က အချိန် တိကျသူ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားသူဖြစ်ရန် ကြိုးစားတိုင်း တစ်ဖက်လူကို အားနာတတ်သဖြင့် သူတစ်ပါးက မိမိ၏ အချိန် ခိုးယူနေမှုကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနှင့် လက်ခံခွင့်ပြုနေရသည်။
အချိန်ကာလ ကြာညောင်းလာသည့်နှင့်အမျှ အချိန်ကို မလေးစားသူ တစ်ပါးသူများ၏ အချိန်များကို ပေါ်တင် ခိုးယူနေကြသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို ကျွန်တော် လွန်စွာ မုန်းတီးမိသည်။ တစ်ပါးသူက မိမိနှင့်တွေ့ဆုံရန် ချိန်းဆိုလာလျှင်ပင် အချိန်မီ သွားရောက်နိုင်ရန် ကျွန်တော် အထူး ကြိုးစားနေရသည်။ မိမိက တစ်ပါးသူ၏ ကိုယ်ပိုင် အချိန်များကို ခိုးယူသူ မဖြစ်အောင် အထူး ဂရုပြုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ မိမိကိုယ်တိုင်ပင် တစ်ပါးသူ၏ တန်းဖိုးရှိသော အချိန်များကို ခိုးယူနေသူ ဖြစ်နေရပြန်သည်။
Recommended for you - စာမေးပွဲအတွက် အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲ ???
ထိုကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများသည် အချိန်ခိုးယူသူဖြစ်လိုက် အချိန်အခိုးခံရသူ ဖြစ်လိုက်နှင့် မဆုံးနိုင်သော သံသရာလည်နေတော့သည်။ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်မှု နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ အမိမြန်မာပြည်သည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် အစစ အရာရာ ကဏ္ဍပေါင်းစုံ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျကျန်ခဲ့ရ သည် မဟုတ်ပါလား… ။
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ အချိန်ကို လေးစား တန်ဖိုးထားသူများ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချသူများ ဖြစ်ကြပါစေသော်ဝ်…. ။
လူသားတိုငျးအတှကျ နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ သာတူညီမြှ ရရှိနကွေသညျ၊ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရကွသညျမှာ အခြိနျ(Time) ပငျဖွဈသညျ။ ထိုသို့ အခြိနျကို စနဈတကြ စီမံခနျ့ခှဲတတျမှုအပျေါတှငျ မူတညျပွီး လူတဈဦးနှငျ့တဈဦး အောငျမွငျမှု ကရြှုံးမှုတို့ကလညျး မတူညီတတျကွပေ။
သကျဆိုငျရာ နယျပယျအသီးသီးမှာ အောငျမွငျ ကြျောကွား ထငျရှားသူမြား သညျ မိမိတို့၏ ကိုယျပိုငျအခြိနျမြားကို စနဈတကြ စီမံခနျ့ခှဲတတျသူမြား၊ အခြိနျကို တနျးဖိုးရှိစှာ အကြိုးရှိစှာ အသုံးခတြတျသူမြား၊ ကိုယျပိုငျ အခြိနျဇယားဖွငျ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးကွသူမြားဖွဈသညျကို လလေ့ာတှရှေိ့ရသညျ။
ကြှနျတျော ဆယျတနျးကြောငျးသား အရှယျက အခြိနျ ခှဲဝသေုံးစှဲမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဆရာတဈဦး ပွောပွခဲ့သော စကားမြားက ကြှနျတေျာ့အတှကျ တနျးဖိုးကွီးမားလှသညျ။ ဆရာက သူ၏တဈနတေ့ာ ဖွတျသနျးမှု၊ တဈလတာ ဖွတျသနျးမှု၊ တဈနှဈတာ ဖွတျသနျးမှုတို့ကို အခြိနျဇယားတဈခု ပွုလုပျပွီး ဘဝကို ဖွတျသနျးသညျ။ သူ၏ အလုပျပွီးမွောကျမှု၊ အလုပျတိုးတကျမှု၊ စီးပှားဥစ်စာ တိုးတကျမှုတို့ကိုလညျး ကုနျလှနျသှားခဲ့သော အခြိနျမြားနှငျ့ အမွဲတမျး နှိုငျးယှဉျသညျ။ တိုးတကျမှု မရှိဘဲ ကဆြုံးမှု ဆုတျယုတျမှုတို့ရှိခဲ့ပါက သူ၏ အခြိနျခှဲဝေ သုံးစှဲမှု မှားယှငျးနေ ခွငျး ရှိ မရှိကို တဈဖနျပွနျ၍ ဆနျးစဈတတျသူ ဖွဈသညျ။
(က) ကုသိုလျရရှိအောငျ ပွုမူနထေိုငျခွငျး
(ခ) ဥစ်စာဓန တိုးပှားအောငျ ရှာဖှခွေငျး
(ဂ) ပညာ တိုးတကျအောငျ ဆကျလကျ၍ သငျယူမှုပွုခွငျး
(ဃ) အသိပညာ ဗဟုသုတမြား တိုးပှားအောငျ ရှာဖှေ လလေ့ာခွငျး
(င) မိတျဆှကေောငျး မိတျဆှသေဈမြား တိုးပှားအောငျ ရှာဖှခွေငျး စသညျ့ အခကျြ(၅)ခကျြကို ဆရာက လကျကိုငျပွုထားသညျ။ တဈနတေ့ာတှငျ ထိုအခကျြ (၅)ခကျြထဲမှ တဈခကျြ (သို့မဟုတျ) နှဈခကျြ သုံးခကျြ မရရှိခဲ့ပါက ထိုနသေညျ ဆရာအတှကျ အဓိပ်ပါယျ မရှိသောနေ့၊ အဓိပ်ပါယျမဲ့သောနေ့ တဈနအေ့ဖွဈ သကျမှတျထားသူ ဖွဈသညျ။ ကြှနျတျောကိုလညျး သူကဲ့သို့ တဈနတေ့ာ ဖွတျသနျးမှုကို အတုယူရနျ ဆရာက အမွဲတိုကျတှနျးတတျသညျ။ သို့သျော လညျး ကြှနျတျောက သညျကနအေ့ခြိနျထိ ဆရာကဲ့သို့ အခြိနျကို တနျဖိုးရှိစှာ အကြိုးရှိစှာ အသုံးမခတြတျသေးပေ။
Recommended for you - အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးကို ဖနျတီးပေးနိုငျတာက
နစေ့ဉျ တနျဖိုးမဲ့ အဓိပ်ပါယျမဲ့ ကုနျဆုံးသှားသော အခြိနျမြားက တဈနေ့ နာရီပေါငျး သုံးလေးငါးနာရီ၊ တဈလ နာရီပေါငျး တဈရာ နှဈရာ၊ တဈနှဈ နာရီပေါငျး တဈထောငျ တဈထောငျ့ငါးရာ ဖွုနျးတီးမိနသေညျ။ ထိုသို့ ဖွုနျးတီးမိ သော ကိုယျပိုငျအခြိနျမြားသညျ ကြှနျတေျာ့၏ ညံ့ဖငျြးမှု အပငျြးထူမှု အားနာတတျမှုတို့ကွောငျ့ဖွဈသလို သူငယျခငျြး မိတျဆှေ အပေါငျးအသငျးမြား၏ အခြိနျခိုးယူမှုတို့ကွောငျ့လညျး ဖွဈသညျ။ တနျဖိုးမဲ့ အဓိပ်ပါယျမဲ့ ဖွုနျးတီးမိသော နာရီပေါငျးမြားစှာကို လှနျစှာ နှမြောမိသညျ။ ကုနျဆုံးသှားသော အခြိနျမြားကို ငှဖွေငျ့ တနျဖိုးသငျ့ပွီး ပေးဝယျ၍လညျး မရနိုငျတော့ပေ။ အခြိနျလှနျ အခြိနျနှောငျးမှ နောငျတရမိခွငျးသညျ အခညျြးအနှီးသာဖွဈရသညျ။
ကြှနျတျောတို့ မွနျမာ့ လူ့ဘောငျအဖှဲ့အစညျးတှငျ အခြိနျကို တနျဖိုးထားသူ၊ အခြိနျတိကသြူ အရအေတှကျမှာ လူတဈရာလြှငျ လူငါးဆယျပငျ ရှိနိုငျမညျ မဟုတျပါ။ လူတိုငျးနီးပါးက အခြိနျကို ခိုးယူနကွေသူ အခိုးခံနရေသူမြား သာ ဖွဈနကွေသညျ။ မိမိက မိမိအခြိနျကို မခိုးလြှငျ တဈပါးသူက မိမိ၏ အခြိနျမြားကို ခိုးယူနကွေသညျ။
” သူငယျခငျြးရေ… မငျးနဲ့ငါ နလေ့ယျစား စားရငျ ပုံမှနျအခြိနျမှာ ဆုံကွမယျ ”
” မငျးနဲ့ငါ နလေ့ယျ(၁၂)နာရီ ဝနျးကငျြလောကျ ဆုံကွမယျ ”
” မငျးနဲ့ငါ ညပိုငျး တှနေ့ကြေ နရော၊ တှနေ့ကြေ အခြိနျမှာ ဆုံမယျနျော ”
ထိုကဲ့သို့ သူငယျခငျြး မိတျဆှေ လုပျဖျောကိုငျဖကျ အခငျြးခငျြး အလုပျကိစ်စ ဆှေးနှေးတိုငျပငျရနျ ခြိနျးဆိုလြှငျပငျ အခြိနျတိကစြှာ ခြိနျးဆိုမှု မရှိ။ အရငျရောကျနှငျ့သူက နောကျလူရောကျလာသညျ့ အခြိနျထိ စိတျကွိုကျ အခြိနျဖွုနျးပွီး စောငျ့ကွရစမွဲပငျ။
Recommended for you - ကြောငျးသားမြားအတှကျ မှတျဉာဏျကောငျးပွီး ခှနျအားဖွဈစနေိုငျမယျ့ အစားအသောကျမြား
မွနျမာပွညျ၏နရော အနှံ့အပွားတှငျ စိတျကွိုကျ အခြိနျဖွုနျးနိုငျရနျ နရောမြားကလညျး နရောတိုငျးမှာပငျ အဆငျသငျ့ရှိနကွေ၏။ လကျဖကျရညျဆိုငျ၊ ထမငျးဆိုငျ၊ အအေးဆိုငျ၊ အရကျ ဘီယာဆိုငျစသညျ့ ဆိုငျမြားအားလုံးက လညျး မိမိ စိတျကွိုကျ အခြိနျဖွုနျးနိုငျရနျ အခှငျ့အရေး အပွညျ့ရှိသညျ။ မညျသညျ့ဆိုငျကမှ အခြိနျကွာမွငျ့စှာ နထေိုငျ ခွငျးအတှကျ ငှကွေေး အသပွာ တဈပွား တဈကပျြမြှပငျ တောငျးခံခွငျး မရှိကွ။ ဆိုငျးတိုငျးလိုလိုပငျ ကွညျကွညျဖွူဖွူ စိတျကွိုကျ နထေိုငျခှငျ့ပေးထားကွသညျ။
မိမိ၏ ကိုယျပိုငျအခြိနျကို တနျဖိုးရှိရှိ အဓိပ်ပါယျရှိရှိ အသုံးခရြနျ ကြှနျတျော စတငျလုပျဆောငျသောအခါတှငျ အခကျအခဲပေါငျးမြားစှာနှငျ့ နစေ့ဉျ ကွုံတှနေ့ရေသညျ။
အလုပျကိစ်စခြိနျးဆိုလြှငျပငျ ကြှနျတျော ခြိနျးဆိုထားသူက ခြိနျးဆိုထားသညျ့ အခြိနျတှငျ အခြိနျမီ ရောကျမလာကွသညျက မြားသညျ။ အမွဲတမျး အခြိနျနောကျကမြှသာ ခြိနျးဆို ထားသညျ့ နရောကို ရောကျလာတတျကွသညျ။ ကြှနျတျောက အခြိနျ တိကသြူ အခြိနျကို တနျဖိုးထားသူဖွဈရနျ ကွိုးစားတိုငျး တဈဖကျလူကို အားနာတတျသဖွငျ့ သူတဈပါးက မိမိ၏ အခြိနျ ခိုးယူနမှေုကို ကွညျကွညျဖွူဖွူနှငျ့ လကျခံခှငျ့ပွုနရေသညျ။
အခြိနျကာလ ကွာညောငျးလာသညျ့နှငျ့အမြှ အခြိနျကို မလေးစားသူ တဈပါးသူမြား၏ အခြိနျမြားကို ပျေါတငျ ခိုးယူနကွေသော မိတျဆှေ သူငယျခငျြးမြားကို ကြှနျတျော လှနျစှာ မုနျးတီးမိသညျ။ တဈပါးသူက မိမိနှငျ့တှဆေုံ့ရနျ ခြိနျးဆိုလာလြှငျပငျ အခြိနျမီ သှားရောကျနိုငျရနျ ကြှနျတျော အထူး ကွိုးစားနရေသညျ။ မိမိက တဈပါးသူ၏ ကိုယျပိုငျ အခြိနျမြားကို ခိုးယူသူ မဖွဈအောငျ အထူး ဂရုပွုသညျ။ တဈခါတဈရံမှာတော့ မိမိကိုယျတိုငျပငျ တဈပါးသူ၏ တနျးဖိုးရှိသော အခြိနျမြားကို ခိုးယူနသေူ ဖွဈနရေပွနျသညျ။
Recommended for you - စာမေးပှဲအတှကျ အခြိနျကို ဘယျလိုစီမံခနျ့ခှဲရမလဲ ???
ထိုကဲ့သို့ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာပွညျသူ ပွညျသားမြားသညျ အခြိနျခိုးယူသူဖွဈလိုကျ အခြိနျအခိုးခံရသူ ဖွဈလိုကျနှငျ့ မဆုံးနိုငျသော သံသရာလညျနတေော့သညျ။ အခြိနျကို တနျဖိုးရှိစှာ အသုံးခနြိုငျမှု နညျးပါးခွငျးတို့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့၏ အမိမွနျမာပွညျသညျ ကမ်ဘာ့အလယျတှငျ အစစ အရာရာ ကဏ်ဍပေါငျးစုံ ဖှံ့ဖွိုးမှု နောကျကကြနျြခဲ့ရ သညျ မဟုတျပါလား… ။
မွနျမာပွညျသူ ပွညျသားမြား အခြိနျကို လေးစား တနျဖိုးထားသူမြား အခြိနျကို တနျဖိုးရှိစှာ အသုံးခသြူမြား ဖွဈကွပါစသေျောဝျ…. ။
Read 4146 times Last modified on Tuesday, 20 February 2018 08:43
စက်မှုနည်းပညာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေး သင်တန်းကျောင်း (SITE) တွင် ကာလတိုသင်တန်းများဖွင့်မည်
3D ဗီဒီယို ဂိမ်းတွေဆော့ခြင်းဟာ မှတ်ဥာဏ် ပိုမို ကောင်းမွန်စေနိုင်
E & J International Language Class
Shwe Pyi Oo